Mausam App Download Ho an'ny Android [2022 Update]
Salama daholo! Eto izahay miaraka amin'ny rindranasa iray izay tena hahasoa ny karana. Ny fampiharana dia antsoina hoe Mausam App ary araka ny anarany dia azonao atao ny maminavina fa misy ifandraisany amin'ny serivisy fanombanana ny toetr'andro. Ity dia rindrambaiko noforonin'ny mpandrindra karana iray izay miezaka manampy ny mpiray tanindrazana aminy.
Izao no fotoan'ny monsoon ary saika isan-taona dia i India no iharan'ny tondra-drano sy rotsak'orana be. Anisan'ny zavaboary ny andro ratsy ary tsy azontsika sakanana izany fa afaka miomana amin'ny tranga tsy ampoizina amin'ny ho avy isika raha manana vaovao momba izany. Mitovy ihany ny tanjon'ny fampiharana, hanome ny vinavinan'ny toetr'andro. Raha afaka maminavina ny toetr'andro isika, dia afaka manao ny fepetra rehetra ilaina mba hiarovana ny tenantsika amin'ny loza.
Tsy misy rindranasa afaka manome anao ny fanavaozana ny toetr'andro satria tsy azo atao ny mahafantatra izay hitranga. Na izany aza, amin'ny fampahalalana marina sy feno dia mety ho marimarina kokoa ny vinavina. Mausam Apk dia manolotra serivisy marobe izay manampy amin'ny fanaovana ny famakiana ho marina sy manakaiky ny marina. Homena anao ny antsipiriany rehetra momba izany.
Izao hanombohana ny vinavina dia mila miditra ao amin'ny bara fitadiavana toerana ianao. Rehefa miditra ny toerana misy anao ianao dia hanomboka hampiseho aminao ny vinavinan'ny antsipirian'ny toerana misy anao izao. Ao amin'ny lisitr'ity vinavina amin'ny antsipirihany ity dia azonao ny mari-pana, ny hafainganan'ny rivotra, ny làlan'ny rivotra. Ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro dia misy ihany koa. Mamelombelona ny ora vaovao ity.
Aorian'ny vinavina dia mahazo sarintanin'ny toetr'andro samihafa ianao izay ahafahanao mahita ny toerana misy ny toetry ny rahona ao amin'ny faritra misy anao. Ny sarintanin'ny orana dia mampiseho anao ny isan-jaton'ny rotsak'orana any amin'ny faritra misy anao sy ny fiantraikany. Mahazo Sarintany zanabolana ianao izay manatsara ny famakianao momba ny tafio-drivotra sy ny orana mivatravatra. Misy sarintany ahafahanao mahita ny vinavinan'ny distrika.
Mousam App dia misy amin'ny fiteny maro toa ny anglisy, hindi. Afaka mifidy fiteny sahaza ho anao ianao. Mangataka fahazoan-dàlana toy ny fidirana amin'ny toerana misy ny fitaovanao ilay fampiharana, mba hahafahany mampiseho anao ny vinavina.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Mausam App
Notanisainay tao amin'ny fehintsoratra ambony ny ankamaroan'ny endri-javatra misy azy saingy mbola misy endri-javatra hafa atolony ary misy lisitra eto ambany:
Tsy mila fividianana rindrambaiko ao anaty app.
Tsy misy doka.
Anaran'ny fonosana com.ndsoftwares.mausam
Ahoana ny fampidinana ny fampiharana Mausam?
Hita ao amin'ny Google Apps Store ny fampiharana ary azonao apetraka avy eo. Azonao atao ihany koa ny misintona ny Apk mora avy amin'ny tranokalanay. Nanome rohy fampidinana marobe izahay mba hanatsarana ny zavatra niainanao. Hanomboka ho azy ny fampidinana anao raha vao mikitika ny bokotra fampidinana ianao. Rehefa avy manindry ny bokotra ianao dia tsy maintsy manam-paharetana mandritra ny segondra vitsy satria efa voaomana ny rakitrao amin'io fotoana io.
Ahoana ny fametrahana ny App Mausam?
Raha misintona ny Apk amin'ny tranokalanay ianao dia mila manaraka ny dingana fametrahana. Mila mandeha any amin'ny toe-javatra findainao ianao> Fikirana fiarovana ary avelao ny fametrahana avy amin'ireo loharano tsy fantatra.
Mandehana any amin'ny mpitantana ny findainao ary tadiavo ilay Apk alaina.
Tsindrio izao ny Apk ary hanomboka ny wizard.
Rehefa manomboka ny mpamosavy dia kitiho ny bokotra Install.
Andraso mandra-pahatapitry ny fizotrany ary tsindrio ny bokotra Vita na Misokatra.
Ho vonona hampiasa ny Application anao.
Ity App ity dia hanampy anao hiomana amin'ny trangan-javatra tsy ampoizina amin'ny ho avy. Ho azonao atao ny mamaky ny toetrandro saika marina.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary te hahita ireo fampiharana farany ianao dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Apps, Weather Tags Mausam Apk, Mausam App, Mousam App Post Fikarohana
Ninja WhatsApp APK ho an'ny Android Download 